အမေရိကန်နှင့် အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သော ဆာဒါး ၏ညွန့်ပေါင်းပါတီတို့ အီရတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနို?? - Yangon Media Group
အမေရိကန်နှင့် အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သော အများကြိုက် ပေါ် ပြူလစ်ဝါဒီ ရှီယိုက်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် မိုတာဒါအယ်လ် ဆာဒါးဦးဆောင်သည့် ညွန့်ပေါင်း ပါတီ အီရတ်လွှတ်တော်ရွေး ကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မေ ၁၉ ရက်တွင်ကြေညာသည်။ အယ်လ်ဆာဒါး၏ ညွန့်ပေါင်း ပါတီသည် လွှတ်တော်တွင် အမတ်နေရာ ၅၄ နေရာ အနိုင်ရခဲ့သည်။ သို့သော် အယ်လ်ဆာဒါးသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်မပြိုင် ခဲ့သဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်း ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အစိုးရအဖွဲ့အပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုး ဖွယ်ရှိသည်။
အီရန်လိုလားသော ဟာဒီအယ်လ်အမီရီဦးဆောင်သည့် ညွန့် ပေါင်းပါတီမှာ အမတ်နေရာ ၄၇ နေရာဖြင့် ဒုတိယနေရာ၌ရပ်တည်ခဲ့သည်။ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ဟိုင်ဒါအယ်လ်အဘာဒီ၏ ညွန့်ပေါင်းပါတီမှာ အမတ်နေရာ ၄၂ နေရာ ဖြင့် တတိယနေရာ၌သာရပ်တည် နိုင်ခဲ့သည်။ အယ်လ်ဆာဒါးသည် အမေရိကန်တပ်များ အီရတ်၌ဝင်ရောက် တပ်စွဲထားမှုကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့သူဖြစ်သည်။ အီရတ်နိုင်ငံရေး၌ အီရန်ဝင်ရောက် စွက်ဖက်နေမှုကိုလည်း မနှစ်သက်သူဖြစ်သည်။
ယခင်အစိုးရများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားကြကာ တိုင်းပြည်ကို ကောင်းစွာစီမံမခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့ကြဟု ပြည်သူများကဝေဖန်သည်။ ထို့ကြောင့် ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာမရှိသော အယ်လ်ဆာဒါး၏ ညွန့်ပေါင်းပါတီ စုအောင်ပွဲခံကြခြင်းဖြစ်သည်။ အယ်လ်ဆာဒါး၏ ညွန့်ပေါင်းပါတီသည် အမတ်နေရာအများ ဆုံးအနိုင်ရခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကို ၎င်းတို့စိတ် ကြိုက်ခန့်အပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် အဘာဒီပင် ဆက်လက်ထမ်းဆောင် ရနိုင်ခြေရှိသည်။ အဘာဒီသည် အမေရိကန်နှင့်အီရန် အားပြိုင်မှု ကြားတွင် ပါးနပ်စွာရှောင်တိမ်းရပ် တည်ခဲ့ပြီး အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ကိုချေ မှုန်းရန် နှစ်ဖက်စလုံးထံမှအကူညီ ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။
ရှစ်လေးလုံး အမည်ခံ နိုင်ငံရေးပါတီ ထူထောင်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်း၊ လူ ၅ဝ?
‘Rocketman’ ရုပ်ရှင်မှ ဂေးလ်ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ဖြတ်တောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရုရှားကို အဆိုတော် အယ်လ်တန်ဂ
ဒုတိယဂိုးသမား ဘရာဗို ဒဏ်ရာ ရရှိသွားသောကြောင့် မန်စီးတီးအသင်း ဂိုးသမား အခက်တွေ့နိုင်
စုပေါင်း သီချင်းသီဆိုခြင်းက စိတ်ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေသကဲ့သို့ ပြန်လည် နာလန်ထူရေးကို အထေ
ဆီးရီးယား အစ်ဒ်လစ်အရေးကို စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆွေးနွေးမည်